Yemagariro Media Ongororo Inoti: Varidzi Vanokwira Kumusoro | Martech Zone
Social Media Survey Inoti: Varidzi Vanokwira Kumusoro
NeChishanu, Nyamavhuvhu 19, 2011 Chipiri, Gunyana 4, 2011 Lorraine Bhora
Maererano 2011 Diki Bhizinesi Yemagariro Midhiya Ongororo, varidzi vemabhizinesi vari kutora vezvenhau zvakanyanya zvakanyanya kupfuura mugore rapfuura. Muongororo yakaitwa kubva Chivabvu 1, 2011 - Chikunguru 1, 2011 takabvunza varidzi mazana maviri nemakumi matatu nevatatu (makambani ane vashandi vasingasvike makumi mashanu) avo vaigadzira zvemukati maakaundi enhau.
Varidzi vari kutora mari
Kubva pamhinduro dzavo, zvaive pachena varidzi vari kutora vezvenhau zvakanyanya sezvo vanopfuura 65% vakaratidza kuti vari kubatikana mukugadzira zvemukati. Iyi muzana yaive yakajairika pakati pemapoka akasiyana evaridzi vemabhizimusi madiki, kudzamara tarisa makambani ane vanopfuura ipapo makumi maviri nevashanu vashandi
Kunyangwe zvavo kutora kwavo chikamu kuchidonha, 50% yevaridzi vemakambani makuru aya vachiri kubatanidzwa. Zviripachena, zvisinei, vatungamiriri ava vari kupa rakawanda rebasa rezvemagariro enhau kune vamwe.
Ndiani ane zvemagariro midhiya zvemukati zvisikwa
Nepo makambani mazhinji ari kudhiraivha munhau, mapurogiramu avo anoperevedza nekuti havanyatso tsanangudza mabasa. Ivo vanokundikana kusarudza kuti ndiani achagadzira zvemukati, kangani uye nezve chii.
Ndakanyadziswa nekuona zvinopfuura ½ makambani ari muchidzidzo asiri kuburitsa vatengi uye tarisiro sejenareta yezviri mukati.
Kubva pane zvipupuriro uye kuongorora, kuenda kuFAQs nekukurukurirana, makambani ari kushaya mukana wakakura nekusaita matunhu aya.
Kwete iyo Mukati
Kunyangwe ichisiyana nekambani pane zvinoratidza kwakasimba pasocial media iri kutorwa zvakanyanyisa muna 2011. Semuenzaniso: Funga nezve basa revadzidzi. Mune yedu 2010 Facebook kudzidza, anopfuura makumi masere muzana emabhizinesi aive nevashandi vevashandi airatidza kuti mudzidzi aibatanidzwa mukugadzirwa kwemagariro enhau.
Kwatiri, izvi zvakanongedzera kumakambani echokwadi anga asiri kunyatso kutora maturusi zvakanyanya. Dai vaive nazvo, vangadai vasina kuvimba nenhengo isina ruzivo rwechikwata chavo kuti vatungamire zvirimo. Muchidzidzo chegore rino, chete makumi matatu muzana emakambani ane vadzidzi vari kuratidza kuti vaibatanidzwa mukugadzira zvemukati.
Nepo varidzi vazhinji vebhizinesi vachitenda kuti vezvenhau vari kuzviitira iwe pachako mhando yechiitiko, pane kufarira kuri kukura mukuhaya kushambadzira uye maficha enhau enhau kutsigira zvavanoita. Pakazara, zvikamu gumi kubva muzana zvemakambani ari muchidzidzo zvakaratidza kuti kunze kwakasimba kwaive kushingairira kuita chirongwa chekambani yemagariro enhau. Kunyange ini ndaitarisira mafemu makuru kuti atarise kunze kunotsvaga rubatsiro, huwandu hwakakosha hwemakambani ari mu10-6 munhu renji aitaridzawo kune zvekunze zviwanikwa.
Zvinoshamisa, makambani ane vashandi gumi nevaviri - 11 aisanyanyo shandisa femu yekunze. Sei? Isu tinofungidzira pahukuru uhwu, makambani ane mumwe munhu pavashandi vane nguva yekutsaurira zviitiko zvezvemagariro. Sezvinotarisirwa, makambani makurusa angangoitawo kuve nemushandi wenhau anozvipira. Iwo makomendi anoratidza zvakare kunetsana pakati pezviitira-iwe-wega uye nekuhaya-a-pro misasa.
Ko varidzi vemabhizinesi vanoti kudii nezvekuwana rubatsiro nemasocial media?
Bhadhara mumwe munhu kumisikidza maakaundi uye nekukudzidzisa maitiro ekuaita zvakanaka. Izvo zvinorema kufambirana navo vese munguva yakakodzera.
Iva neprofessional ita yako Yemagariro Midhiya. Iwe unoshandira CPA nekuti haugone kuita accounting, kuhaya nyanzvi yemagariro
Mazuva ano munhu wese ari "social media nyanzvi" iwe unoziva zvakanyanya sezvavanoita.
Bhadhara mumwe munhu anogona kukudzidzisa iwe, tora masocial media maturusi kumusoro uye unomhanya izvo zvinoenderana neyako brand.
Gamuchira nhepfenyuro yemagariro asi ive leery yemasocial media "nyanzvi" uye vanachipangamazano.
Iwe unoda here kopi yemhedzisiro yakazara yeongororo? Unogona kurodha pasi kubva Roundpeg, Indianapolis social media yakasimba.
Webhu Dhizaini maringe neWebhu Vagadziri